Sare & Cunto; 3 Talooyin si aad u soociso Qodobbada URL-ka Google Analytics Warbixinnada Google
Xayeysiisyada Google Analytics waa hab si xor ah uula socota dadaalka suuq-geynta shabakadda. Haddii koontadaada Google Analytics ay la socdaan boqolaal kun oo bogag gaar ah oo aan run ahaantii jira, fursadaha ayaa ah in URL-yada fara badani ay faragelinayaan xogtaada. URL-yada noocaan ahi uma muuqdaan kuwo caadi ah, oo xuduudaha waxaa lagu lifaaqay hal mar markale iyo mar labaad. Natiijo ahaan, badiba booqdayaasha ayaa loo wareejinayaa cibaadadaada, waana inaad kordhisaa tirada dadka soo booqda adigoo ka saaraaya xayeysiisyada URL ee fool xun oo ka imanaya warbixinnada Google Analytics - temperature sensing systems.
Arrintan awgeed, waa in aad maskaxda ku haysaa talooyinka soo socda ee ku qeexan Oliver King, oo ah khabiir hormood ah oo ka socda Semt
1. Ka saar qodobbada Baaritaanka:
Calaamadi URL-kaaga si aad u hesho macluumaad luqadeed ama kalfadhi ah oo ka saar qodobada wareysiga. Ugu horreyntii, waa in aad qeexdid calaamadaha URL-yada ee aan faa'iido lahayn waana in laga reebaa warbixinnadaada. Tallaabada xigta waa inaad eegto Doorashada Xulashada ee ku jira xisaabta Google Analytics oo ku dar liiska xayeysiisyada su'aalaha aad jeceshahay in laga saaro. Waxaa suurtagal ah in la nadiifiyo daqiiqado gudahood. Tani, waa inaad hagaajisaa goobaha koontada Google Analytics oo aad sameysatid shaashado dhammaan URL-yada faqiirka ah. Haddii aad rabto inaad samayso xisaab cusub Google Analytics, waxaad ka baqi kartaa inaad xogtaada ku dhaafto xisaabta Google Analytics kale..Si aad uga fogaato isku-kalsoonaanta, waa inaad tagtaa qaybta Muuqaalka ee xisaabtaada cusub ee cusub ee cusub ee Google Analytics oo ku dar shuruudaha URL ee shaandhooyin kala duwan. Markaad ku darto, ha ilaawin inaad kaydiso isbeddelada oo sugto wakhti yar oo xog ah si aad ugu shubto astaanta cusub ee Google Analytics.
2. Ku dheji raadinta goobta:
Waa inaad ka saartaa xuduudaha raadinta raadinta Google warbixintaada Google Analytics si loo xaqiijiyo ammaankaaga goobtaada. Ka dooro Doorashada Xulashada, u gudbi goobaha raadinta Site oo guji sanduuqa xayeysiiska Strip oo ka baxsan badhanka URL. Waa inaad maskaxda ku haysaa in xisaabaadka Google Analytics aysan dib u daabicin xogta qiimaha kasta. Si kale haddii loo dhigo, waxaad ka saari kartaa xayeysiinta xogta hore. Taas macnaheedu waa xogta horey u socota waxay yeelanaysaa in ereyada URL laga saaro
3. Isku-dubbarid bogga iyo garaacista:
Haddii server-kaaga webka u adeegsado mawduuc ay u egtahay faylka index.php, waa inaad isku-xidhka bogga iyo sidoo kale jajabyada raadraaca. Google Analytics wuxuu xiri karaa domain, sida asrazyegg.com, wuxuuna hubiyaa qaybaha soo haray ee xarfaha URL si loo tiriyo tirada guud ee boggaga gaarka ah. Natiijada, URL-yada xariirka firfircoon waxay abuuri karaan bogag u gaar ah Google Analytics si loo diiwaan geliyo.
Fikradaha kama dambaysta ah:
Google Analytics waxay geli doonaan URL-yadaada badan sida boggaga gaarka ah. Sidaa daraadeed, warbixintu waa la jahawareerayaa boqollaal kun oo muuqaalo bog ah oo aan gaarin oo aan kufilan inay bixiyaan wax qiimo leh ganacsigaaga. Waxaa suurtagal ah in URL-yadaada URL aysan aheyn inaad bixiso macluumaadka fikradaha. Tusaale ahaan, inta badan lambarrada URL ee leh lambarrada alaabada, dhimista, iyo qawaaniinta qiimaha ayaa loo aqoonsan yahay inay muuqaalka bogga gaarka ah ee akoonka Google Analytics kashaqeeyaan